Nagu saabsan - Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co., Ltd.
Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co., Ltd. waa soo saare xirfadlayaal ah isla markaana dhoofisa koronto soolar ka badan 10 sano. Waxaan ku takhasusay naqshadeynta, soo saarista iyo iibinta unugyada cadceedda, modulladaha loo yaqaan 'photovoltaic modules' iyo nidaamyada qorraxda.
Apex Solar wuxuu leeyahay xirfad yaqaan R & D iyo kooxda maaraynta, wuxuu si adag u raacaa heerarka imtixaanka caalamiga ah ee TUV, CE, CEC, CQC, ISO9001, ISO14001. Isla mar ahaantaana, Apex Solar wuxuu soo bandhigi karaa wax soo saar la habeeyay iyo 12 sano oo soosaarid shey ah iyo 25 sano oo awood ah. Ilaa hadda, qaybaha ugu sarreeya ee qorraxda oo ay ku jiraan monocrystalline iyo polycrystalline noocyada ayaa loo rakibay shabakadda shabakadaha, shabakadaha ka baxsan iyo nidaamka isku-dhafan ee suuqyada waddamada Yurub, Australia, Kanada, Koonfurta Ameerika, Afrika, Bariga Dhexe iyo Aasiya. Waxaan aaminsanahay in badeecooyin tayo sare leh iyo keenis deg deg ah ay keeni karaan iskaashi muddo dheer ah. Ku qanacsanaanta macaamilku waa awooddeena wadidda horumarka joogtada ah.
Shirkadda Apex Solar waxay soo bandhigtay qalab wax soo saar otomaatig ah oo casri ah si ay u soo saaraan baalayaasha cadceedda oo tayo leh oo lagu kalsoonaan karo dhammaan macaamiisha, warshadda Vietnam waxay leedahay awood sanadle ah oo dhan 200MW, awoodda wax soosaarka Shiinaha ee modules PV ayaa gaartay 600MW sanadkii, wadarta awoodda wax soo saar 800MW sanadkii. Waxaa jira nidaam dhammaystiran oo QC ah oo laga fikiray bilaw ilaa dhammaad. Dhammaan alaabta ceyriinka ah ee la isticmaalay waxay ka socdaan alaab-qeybiyeyaasha Tier 1, waxay u soo bandhigaan isla wax soo saar tayo leh sida magaca sumcadda soosaarayaasha qaybta qoraxda ee Shiinaha oo leh qiime aad u tartan badan.
In ka badan 50 waddan oo loo socdo
Dhamaan qoraxda waxaa sameeya unugyada darajada A, Dhammaan alaabada ceyriinka ah ee la isticmaalay waxay ka yimaadeen alaab-qeybiyeyaasha Tier 1
In ka badan 2GW ee qalabka rakibidda Module
In ka badan awoodda rarka 3GW